N'okpuru Igwefoto Mmiri DVR, Igwefoto Dual, 4.3 "LCD, 20meters (SPY276) | OMG Solutions
N'okpuru Mmiri Igwefoto DVR, Igwefoto Dual, 4.3 "LCD, 720P & 480P, 20meters (SPY276)
Ngwaahịa a bụ ihe kachasị ewu ewu, usoro ejiji, nke dị mma ma na-adaba adaba. Ọ bụghị nanị na ihuenyo buru ibu na agba, mana nwekwara igwe foto dị elu nke nwere HD 600 TV edo. Kedu ihe ọzọ, enwere ọkụ ọkụ 6 maka ọkụ ọkụ, ma ọkụ ọkụ 6 a na-ekewapụrụ na igwefoto iji gbochie mmiri na-abanye na igwefoto.
A. Igwefoto Video Mmiri a na-egosi ihuenyo agba TFT 4.3 buru ibu, na nkọwa nke igwefoto dị na HD 600TV, nke doro anya karịa igwefoto 420TV.
B. Ịga n'ihu iji oge nke batrị lithium karịrị oge 7 mgbe batrị zuru ezu. Mgbe a na-ebu ebubo, ìhè ahụ na-acha uhie uhie, ọ ga-agbanwe akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụrụ na ebuchara ya niile.
C. Ị nwere ike ịgbanwe usoro igwefoto ahụ site n'enyemaka nke eriri na mgbanaka ígwè, a na-egosipụta nkọwa nke arụmọrụ dị ka ndị na-esote.
D. Igwefoto igwefoto vidio a nke HD a nwere nzere dị ntakịrị na obere size, nke dị mfe maka ịkwanye ebe ọ bụla ị chọrọ.
Ngwa: nyocha nke mmiri; Ocean / Ice / Lake ịkụ azụ; Igwu / ndakpu mmiri / snorkeling; Ọfọn / okpu oku Nnyocha Igwefoto Mmiri Azụ Mmiri
Chaja: 100VAC-240VAC DC12.6V
Ịga n'ihu iji oge nke batrị ahụ: banyere 5 awa
Ogologo igwefoto ogologo: 20m
Mmiri igwefoto: 6 elu-ike ọkụ na-acha ọcha ọkụ
Igwe igwefoto: 140
Foto igwefoto: 600TVL igwe agba
Nyochaa ndenye voltage ọsọ ọsọ: 12VDC
Aluminom-igbe size: 300mm * 140mm * 80mm
Nzuzo 4534 31 Echiche Taa